Baasaboorka Soomaaliya oo kagalay 106 liiska baasaboorada caalamka - Tilmaan Media
Baaritaan uu sameeyay ururka “Henley and Partners” oo ah urur ku yaal dalka ingiriiska kana talo bixiya arrimaha la xiriira deganaanshaha iyo socdaalka ayaa waxay ku sheegeen halbeegooda sanadlaha ah ee “Henley Passport” in baasaboorka Soomaaligu kaalinta 106 ka galay sanadaan 2021 kala saraynta baasaboorada caalamka.
Halbeega oo is barbardhig ku sameeya baasaboorada 199 dal ayaa sanadkaan waxaa kaalinta koobaad galay baasaboorka Japan, halka kaalimaha labaad iyo saddexaad na ay kala galeen dalalka Singapore iyo Jaramalka.Sida halbeega ka muuqata baasaboorka Soomaaligu wuxuu ka horeeyaa 105 dal baasabooradood halka ay isaga ka horeeyaan 93 baasaboor.
Halbeega shirkadaan ayaa baasaboorada ku qiimeeya tirada dalalka muwaadiniinta baasaboorkaan watta ay fiiso la,aan ku tagi karaan, tirada dalalka fiisada on arrival lagu siiyo iyo tirada dalalka ay tahay in fiiso lasoo qaato kahor intaan la,imaan. 6 dal ayaa baasaboorka Soomaaliga fiisa la,aan lagu gali karaa, halka 26 dal fiisada laga qaadan karo aireportka. 165 ta dal ee kale waxaa khassab ah in fiiso lasoo qaato kahor intaan lasoo galin.
Dalalka Soomaaliya dariska la, ah sida Kenya iyo Itoobiya ayaan aad oga fogayn halka ay Soomaaliya joogto, baasaboorka Kenya ayaa galay kaalinta 73aad halka baasboorka Itoobiya uu galay 98 aad.